Obeqhosha ngoMsinga ubulawe etekisini - Ilanga News
Home Izindaba Obeqhosha ngoMsinga ubulawe etekisini
Obeqhosha ngoMsinga ubulawe etekisini
Kuthiwa ubedakiwe etshela abantu ukuthi akayesabi enye indoda
IKHIPHE isidumbu indaba yokuqhosha komgibeli wetekisi ngokuthi yena ungowaseMsinga, ngeke adlale amanye amadoda, emuva kwengxabano esuke ngokuthi omunye umgibeli ubebhema emotweni ngoLwesihlanu ebusuku kule khumbi, okuthiwa ibisuka eGoli iya eNkandla.
ILANGA lithole ukuthi uMnu Bhekizizwe Mthokozisi Dlamini (40), waseMsinga, udutshulwe wabulawa ngomunye umgibeli ogcine ehle eNkandla.
Emuva kokudubula uMnu Dlamini, kuthiwa umbulali ukhombe umshayeli ngesibhamu, wamphoqa ukuba amise imoto endaweni eyisigange, eVumanhlamvu, eNkandla, wehlisa isidumbu, watshela umshayeli ukuba ashaye achithe nemoto, yaze yama ngoba sekusho yena.
UMnu Dlamini kuthiwa ubulawa nje, ubelibangise ezihlotsheni zakhe kunomcimbi.
UMnu Siyabonga Dlamini onguyise omncane kamufi, okunguyena obenze umcimbi, uthi indodana yakhe ibulawa nje, ibisibabikelile ngesikhathi bekhuluma nayo ngocingo ukuthi kunomuntu esixabane naye ekhumbini, uyisabisa ngokuthi uzoyibulala.
Uthi bebelokhu bexhumana nayo ngesikhathi isetekisini, ibazisa ukuthi imoto isikuphi njengoba bekumele bayihlangabeze ngoba ibiqala ukuya kwayise omncane.
“Udaba silubikelwe ngumshayeli wetekisi. Usitshele ukuthi indodana yami ibihleli ngaphambili ekhumbini, ingene iphethe utshwala.
“Bebehamba bephuza bonke emotweni nabanye abagibeli obekungabesilisa bodwa.
“Uthe bekunzima ukubakhuza ngesikhathi bephuza emotweni. Usitshele ukuthi umuntu obekhipha utshwala obuningi yindodana yami,” kusho uMnu Dlamini.
Uthi umshayeli ubatshele ukuthi indaba isuswe ngomunye wabagibeli obesephuzile, obelayitha ugwayi emotweni.
Abanye abagibeli bakhuzile, bethi mawungalayithwa ugwayi imoto ihamba.
“Sithole ukuthi kusabangwa yona indaba kagwayi, indodana yami ichomele abanye abagibeli ngokuthi ingeyaseMsinga yona, kayiwesabi amanye amadoda, ngeke idlale enye indoda.
“Kuthiwa umbulali naye okusolwa ukuthi ubesephuzile, uthukuthele wagana unwabu, wayisabisa ngokuthi akayesabi yena indodana yami, angakhipha isibhamu ayidubule manje.
“Kuthiwa baqale ngokuhilizisana, umufi ephikelela ethi akesabi muntu yena, ungowase-Msinga.
“Umbulali okuthiwa ubehleli esihlalweni sesibili uma kusuka emuva, udonse isibhamu, wadubula amahlandla amathathu ebhekise kumufi, kwethuka bonke abantu abebesemotweni.
“Emuva kwalokho uyalele umshayeli wemoto ukuba angami ndawo, kuyoze kusho yena ukuthi makame. Umshayeli ubeseshayela ebambe nesidumbu sendodana yami, ebisiwele ngakuyena, eqhaqhazela kwaze kwaba bafika endaweni enesikhotha, eVumanhlamvu.
“Umbulali uyalele umshayeli ukuba amise imoto, waphuma wadonsela umufi phansi nakho konke abekuphethe, obekukhona nemali emaphaketheni.
“Isidumbu basishiye eceleni komgwaqo, umbulali wayalela umshayeli ukuba makayishaye izule waze wayokwehla endaweni eyihlane,” kusho uMnu Dlamini.
Uthi umshayeli ubatshele ukuthi umbulali umyalele ukuba abuyele emuva ayoqhubeka no-kwehlisa abanye abagibeli abebegcwele imoto.
Kuthiwa ngaphambi kokuba imoto isuke, ufune ibhuku elisuke linemininingwane yomgibeli nezinombolo zezihlobo zabo. Ulithathile washaya wachitha.
UMnu Dlamini uthi nakuba begcine besitholile isidumbu sendodana yabo, basizwe yinduna yendawo, uNkk Sebenzile Nhlebela, ehlabe umkhosi kumalungu omndeni.
Uthi kuthe uma bashayela ucingo lukamufi, befuna ukuzwa ukuthi usekuphi nendawo, lwaphendulwa ngowesifazane ozibize ngokuthi uyinduna yendawo, wabatshela ukuthi sekwenzeke umonakalo.
Utshele leli phephandaba ukuthi indodana yakhe ibingumuntu olungile yize ibikhonze amambawu, kodwa ibingenalo udlame.
UNkk Nhlebela utshele ILANGA ukuthi sibethusile lesi sigameko.
Uncome umshayeli wetekisi ngokuba nesibindi njengoba le nto yenzeke eshayela, futhi wakwazi nokuyobika udaba emaphoyiseni.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa avule icala lokubulala, bekungakaboshwa muntu. Amaphoyisa asaphenya.
Previous article‘Kuqeqeshe’ nomxhumanisi iChiefs ibheda
Next articleSeziphumelele izitshudeni zeLANGA